Akwa akwa silica bụ ụdị akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ inorganic fiber. Ruru ya anụ chemical Njirimara, elu okpomọkụ na-eguzogide ma na ablation eguzogide, na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji aerospace, nkà mmụta banyere ígwè, chem ...
Aluminium foil na-eguzogide eriri nwekwara ike-akpọ seramiiki eriri na aluminum silicate eriri. Ceramic fiber bụ isi ihe nnọchianya nke eriri ọkụ na-eguzogide ọkụ n'ụzọ sara mbara, nke bụ aha izugbe alumina, silica, aluminom ...
Etu esi ahọrọ akwa fireproof ruru eru n'ụzọ ziri ezi
Fireproof ákwà bụ ụdị akwa mere nke na-abụghị combustible ihe, nke a na-akpan iji maka ọkụ mgbochi na ọkụ ire ọkụ retardant pụrụ iche ọrụ. Dị iche iche ngwa ndapụta nwere dị iche iche chọrọ maka fireproof ákwà. Ị nwere...
Kedu ihe bụ ihe na-emetụta ọnụahịa nke akwa akwa ọkụ
Fireproof ákwà bụ ụdị ngwaahịa na elu eletriki mkpuchi larịị, nke nwere ike na-anabata elu voltaji ibu, na nwere ike n'ime insulating ákwà aka uwe, wdg Ọ na-nwere mmetụta na mmebi nke ọkpọkọ na kwes mgbasa na con ...
Kedu uru nke akwa silicone
Teepu Silicone bụ ụdị acid na alkali na-eguzogide ọgwụ na ngwaahịa ndị na-eguzogide ọgwụ, nke a na-ejikarị eme ihe na osisi kemịkal na ụlọ ọrụ ntanetị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, bụ ngwaahịa nwere ike iguzogide nrụgide dị elu. Yabụ, kedu uru arụmọrụ dị mma nke ngwaahịa a? The roba tube mere nke ákwà silicone ...